China Rubber enamathela, ukudluliswa kwamanzi, UV kagesi gwedla izinwele ibhulashi nge nezimo isiguqo ifektri abakhiqizi | Yongsheng
Ukumbozwa kwerabha, ukudluliswa kwamanzi, ibhulashi lezinwele likagesi le-UV elinomshini oguquguqukayo
Izinto: ABS, iraba, inayiloni,
Umbala: Umbala we-UV kagesi, i-Rubber enamathela, Injection… Ukwenza ngokwezifiso.
I-paddle brush enezikhonkwane eziguquguqukayo nezikhonkwane zenayiloni. Kungakhathaliseki ukuthi unezinwele ezinhle, ezijiyile, ezisontekile, ezimanzi noma ezomile, I-Paddle Brush emnene isebenza nazo zonke izinhlobo zezinwele, ikunciphisa kahle njengoba uyihlikihla kubude bezinwele zakho. Ngeke idonse noma idonse, esikhundleni salokho ama-bristles ayindilinga azobhucunga kahle ikhanda lakho. Futhi ingafinyelela imiphumela yobungcweti yasekhaya ekhaya ngesitayela esisheshayo nesisebenza kahle, ilungele ukuncipha kanye nokomisa ukushaya ukuze uthathe izinwele zakho zimanzi zome. Ishiya izinwele zakho zithambile, zibushelelezi futhi zibushelelezi. Okufaka ukwakheka kwendabuko okwenzelwe ukuqondisa, ukukhuphula amandla, ukunamathisela noma isitayela ngenkathi kumiswa ngokushaya, kuza ngemibhalo yezimbali nemibala yamaswidi wamehlo. Faka ibhulashi lokugwedla okuvelayo ngesisekelo salo esibanzi, esiguquguqukayo sesikhumba kanye namabhulashi akhishwe ibhola, ukuze usebenze futhi ujabulele ukuxubha nokuxineka mahhala. Amabhulashi e-Paddle alungele izinwele ezinde eziqondile noma izinwele ezinyene. I-cushion egcwele umoya isebenza njenge-intshi yokushaqeka ye-intshi yesikhumba sakho esibucayi. Amathiphu e-bristle eboshwe, ayindilinga asiza ukuvimbela ukubambeka nokuqhekeka futhi enze ukuxazulula ngaphandle kokudonsa.
Ibhulashi lesigwedlo sezinwele elinezinhlobo ezahlukahlukene zezibambo ezingasheleli ezintsha nezintsha ze-ergonomic. Lezi zibambo zenzelwe ngokukhethekile ukulawula okuphezulu nokunethezeka ngenkathi isitayela. Kulula ukufeza imiphumela yobuchwepheshe be-salon ekhaya ngaleli shayela. Ungakhetha izinhlobo eziningi zezibambo, isibambo esilula sakudala, isibambo esenziwe ngepuleti, umumo okhethekile wesibambo….
Langaphambilini Professional round izinwele ibhulashi nge lokushisa eliphezulu ukumelana ngesitayela ezahlukene
Olandelayo: Ukumbozwa kwerabha, ugesi we-UV, ukuphrinta okukhanyayo, ibhulashi lokudlulisa amanzi elenza ngamanzi nge-Intelliflex bristles
Ijika Lebhulashi Lezinwele
I-Hard Bristle Hair Brush
Ibhulashi lezinwele elingenalutho
Ibhulashi Lezinwele Eziyindilinga
Unxantathu Izinwele Ibhulashi
Izinwele Izinwele Ibhulashi
Iraba enamathela, UV kagesi, shinning ukuphrinta, w ...
Usizo lwabenza imisenenzi nxazonke izinwele ibhulashi nge tempera okusezingeni ...